China Ceiling nitaingina LED mpanamboatra loha fandroana retangular sy mpamatsy | Chengpai
Isa maodely CP-3T-50100FLD
Fametrahana Tafapetraka ny valindrihana
Refy mandro overhead
halavan'ny 40 "(1000mm)
sakany 20 "(500mm)
Hanheld loha mandro lafiny 25x25x185mm
Halavan'ny fantson'ny fandroana tànana 1500mm
Head shower 304 vy vy, silika
Mpangaro 304 vy vy, plastika
Tanana loha mandro 304 vy vy, silika
Hose fandroana tànana 304 vy vy, fingotra
Tompon'ny fandroana tanana 304 vy vy
Lanja milanja (kg) 21.00
Lanja mavesatra (kg) 23.00
Tafiditra ao anaty sandry ENY
Anisan'izany ny mpitazona ENY
Ny lohan-doha sy ny fantson-tànana misy tanana ENY
Misy jiro LED ENY
Tafiditra ao anaty fauxet ENY
1.Niorina ao anaty mpamokatra herinaratra hydraulic Mini ho an'ny LED.
2.Telo ny hazavan'ny jiro LED hanondroana ny mari-pana amin'ny rano
3. Fanamafisana ny vy vy 304.
4. Ny haavon'ny sandry Shower dia azo ovaina amin'ny fivezivezena.
5.Mora madio. Ny savoka slicon dia azo fafana haingana.
6.Telo lamina famafazana: fandroana ranonorana ao ambony, faucet ary fandroana tànana.
Ity setrano fandroana LED mihantona vita amin'ny valindrihana ity dia misy spray feno ho anao. Rano matevina tsy misy fangarony vy be lohataona, fandroana fandroana toradroa toradroa, riandrano fandroana fandroana feno rakotra vatana manontolo Afaka manana traikefa spa any an-trano ianao
Rainmaker mandro mahitsizoro, mirefy 500x1000mm, amin'ny chrome borosy miaraka amina disika famafazana vy dia maneho ny firoboroboan'ny fahafinaretana amin'ny ambaratonga lehibe. Manamboatra faritra spa mahavariana izy io. Ny endriny kanto sy ny metaly avo lenta dia miharihary fa manatsara ny toerana fidiovana.
Faritra fandroana lehibe kokoa, miaraka amina vazaha silika 377 mizara be amin'ny lohan'ny loha fandroana. Ny fiaramanidina silika dia manakana ny fananganana sokajy sokay mba hikolokoloana fahafinaretana maimaimpoana, mahatohitra ny fanakanana, mora diovina, fanoherana oksizenina ary mahazaka harafesina. Miasa tsara na dia eo ambany tsindry ambany amin'ny rano aza. Tsy toy ny lohan'ny fandroana rindrina nentim-paharazana izay mitaky anao hanitsy ny vatanao hahazoana rakotra rano tsara indrindra, ity valindrihana valindrihana apetraka mivantana ity dia manome perimeter malalaka ho an'ny fandrakofana rano izay midina mahitsy amin'ny karazana orana miaraka amin'ny rano mivoaka amin'ny zoro. ny fomba fiasan'ny loha fandroana rindrina.
Fananganana vy tsy metaly 304, manome toky kalitaon'ny fiainana lava maharitra, faharetana ary fahombiazana maharitra. Ny famaranana chrome poloney dia manome endrika marevaka, mety kokoa amin'ny fomba fandroanao.
Lohan-doha mitazona tànana toradroa, miaraka amin'ny fantsom-by tsy miovaova 150cm manome fahafaham-po tanteraka anao isan'andro. Ny lohan'ny fandroana dia vita amin'ny vy vy 304, mahery ary azo antoka.
Ny valizy mandro dia ny motera misy ny rafitra fandroana iray manontolo. Ny vatany dia vita amin'ny vy tsy metaly 304, mahery sy matanjaka, tsy ho tafaporitsaka mihitsy. Kitapo diverter napetraka ho an'ny shower izay voafehy mora foana. Cartridge vita amin'ny ceramic izay vita amin'ny faritra vita amin'ny seramika tsy misy poizina avo lenta, handresena ireo olana amin'ny toe-javatra samihafa amin'ny rano.
Ny haavon'ny sandry efatra dia azo ovaina amin'ny fivezivezena, manome tsindry matanjaka kokoa amin'ny fandroana. Ny sandry mandry dia vita amin'ny vy vy 304, mahery sy azo antoka mitazona ny lohan'ny fandroana lehibe.
Teo aloha: Loha fandroana boribory LED misy sandry showr
Manaraka: Faucet an-dakozia LED ny vy vy
Lohan'ny fandroana Chromed
Latsaka ny orana mivatravatra
Eco Head Shower Rain
Loha fandroana maivana
Rv Rain shower shower
Loko ho an'ny fandroana
Head Shower Kianja
Loha fandroana Super manify miafina nitaingina
Toeram-pandroana efitrano fandroana efamira
Tontonana efitrano fandroana chrome volamena rozy efatra